Kunshan Quanshun aluminium Forging Co., LTD., Natsangana tamin'ny taona 2000, dia nanana orinasa telo, dia ny Kunshan Quanshun Aluminium, Kunshan Quanshun Aluminium forging co., LTD., Ary Kunshan Quanshun Auto aluminium faritra Co., LTD., Miaraka amin'ny isan-taona sandan'ny vokatra 200 tapitrisa yuan. Izy io dia andiana fitrandrahana aliminioma, fanodinana firaka aliminioma, firoboroboan'ny firavaka alimina mandeha ho azy ho iray amin'ireo orinasa mitambatra. Ny orinasa dia mandrakotra velarana 150 mu, miaraka amin'ny atrikasa mirefy 100 000 metatra toradroa, mpiasa 150 ary varotra 200 tapitrisa yuan isan-taona.
Ny orinasa dia manana hery ara-teknika matanjaka, miaraka amin'ny fitantanana kalitao avo lenta, teknolojia, fisafoana, ekipa mpamokatra, arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny indostria isan-karazany mba hanomezana vokatra, ny fampandrosoana ny marika isan-karazany, ny haitao fanodinana isan-karazany avo lenta faritra vita amin'ny alimo alimo. Ampiasaina be amin'ny fiara, moto, herinaratra herinaratra, lalamby haingam-pandeha, indostrian'ny miaramila, milina fanaovana milina ary orinasa hafa.
Ny orinasa dia manana rafitra antoky ny kalitao feno sy mahomby ary azo antoka ny famokarana sy ny fikirakirana teknolojia, miaraka amin'ny 1650 taonina, 800 taonina fanodinana extrusion, afaka mamokatra fanamarihana isan-karazany amin'ny alim-by alimo alimina, laharana, mombamomba; Miaraka amin'ny 1600 taonina, 1000 taonina, 630 taonina, 400 taonina, 300 taonina seta 10 toy ny presse de friksi, dia afaka mamokatra famonoana aluminium 5 mm ~ 800 mm Ø Ø; Drafitra maty farany, fitsaboana hafanana, famonoana olona, ​​fahanterana, fikolokoloana fitaovana ambony sy foibe CNC CNC ary fitaovana hafa dia afaka mahafeno ny fivoaran'ny lasitra sy ny vokatra takiana amin'ny vokatra. Tehirizo amin'ny ambiny farany ambony ny vidin'ny famokarana sy ny fitaterana hahafeno ny fangatahan'ny mpanjifa.
Quanshun dia nandalo ary nametaka tamin'ny fomba henjana ny rafitra kalitao ISO9001: 2000, ary manaraka ny politikan'ny kalitaon'ny "kalitao mifantoka amin'ny kalitao, mendri-piderana, manam-pahaizana ary manatsara hatrany". Manome hatrany ny mpanjifa vokatra sy serivisy manara-penitra izay mifanaraka amin'ny takian'izy ireo, ka mahazo ny fankatoavana sy ny fahatokisan'ny mpanjifa. Orinasa midadasika sy salantsalany toy ny Giant, Oricombamag, Luo Group, Ningbo Top Group, Hetian Industrial, Zero MotoCYcl, ensto dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amintsika. Mivelatra haingana koa ny tsena iraisam-pirenena. Ny vokatra dia amidy tsara any Eropa sy Amerika, atsimo atsinanan'i Azia.
Miarahaba ny mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany izahay hitsidika sy hifampiraharaha amin'ny orinasa ary hiara-hiasa ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa.
FAMPANDROSOANA ALUMINIANA PROFESSIONAL MANOKANA
Manana ekipa mpamolavola r & D matanjaka izahay, afaka manome anao famolavolana fijanonana mety ho an'ny serivisy vokatra.
Manana rafitra matanjaka sy feno aorian'ny fivarotana izahay, ka tsy misy ahiahy ny famokarana sy ny varotra.
Manana fitaovana fitiliana tonga lafatra sy matihanina fitsapana izahay mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra amin'ny vokatrao dia vokatra mendrika.